Yukatán chaiwo koshitomu: Muenzaniso wepasirose weiyo miscegenation | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 22/06/2021 10:20 | tsika nemagariro, Mekisiko
Iyo yakajairika koshitomu yeYucatán ine midzi yayo munhoroondo yeinozivikanwa peninsula yeMexico, sezvo ichienderana nenguwo zvipfeko zvemestizo munzvimbo iyi. Asi zvakare inosanganisira zvinhu zvinopfekwa neSpanish senge iyo holland uye chantilly lace and the zvishongo zvechitendero.
Chero zvazvingava, iri sutu yakajeka uye nyowani, zvaigona sei kupiwa imwe nzira yekunze inopisa yeYucatan, ine avhareji tembiricha yegore iri yakatenderedza 28 degrees Celsius. Asi zvakare chipfeko chinoratidza tsika yakapfuma yenyika yeYucatecan. Naizvozvo, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve zvakajairika zvipfeko zveYucatan, isu tinotanga nekutaura newe zvishoma nezve nyaya yake.
1 Chaiye chipfeko cheYucatán sechiratidziro chenhoroondo yenharaunda
2 Ndeipi yakajairika koshitomu yeYucatan
2.1 Iyo huipil kana hudil
2.2 Yukatán chaiwo chipfeko chevakadzi
2.3 Iyo yakajairika Yukatán koshitomu yevarume
3 Nguo yekuYukatán inoshandiswa riini
3.1 Dairy uye jarana
Chaiye chipfeko cheYucatán sechiratidziro chenhoroondo yenharaunda
Vakadzi vakapfeka zvipfeko zvavo zveYukatán
Kuparadzanisa, chaizvo, kubva kune yayo yezuva mamiriro ekunze, kana iyo Yucatan Peninsula inoratidzwa nechimwe chinhu, ndeye nhoroondo yayo yakapfuma. Pamwe inogarwa kubvira iyo Pleistocene, sezvakaratidzwa nezvakasara zvinowanikwa mu Loltín mapako, vaive zvakadaro mayans uyo ane vanhu vazhinji muYucatán.
Muchokwadi, dunhu rayo rizere nenzvimbo dzekuchera matongo dzaive maguta ekare eiyo pre-Columbian budiriro. Pakati pavo, avo Chunchucmil, Chichen Itza, Oxkintok o Acanceh, ine Piramidhi yaro inozivikanwa yeDing Deer. Chero zvazvingaitika, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iro guta, ita chokwadi chekuziva nezve zvakawanda zvinoshamisa chii chaunogona kuona muYucatan.
Nekuuya kwevaSpanish netsika dzavo, chinamato cheKaturike uye madhirezi matsva ematare eEurope akasvikawo munzvimbo iyi, zvese izvi zvakakonzera chimiro cheYucatan, sezvatakakuudza kare.
Chipfeko ichi chaizopfekwa munzvimbo dzakakura munzvimbo iyi, mazhinji acho achiri kugona kuonekwa nanhasi. Pakati peizvi, izvo zve San Antonio Sodzil, Xtepén, Uayalceh kana kutonyanya kushamisa kwe Temozón.
Nechekare munguva dzemazuva ano, zvakajairika zvipfeko zveYucatan, sezvazvakaitika mune dzimwe nzvimbo zhinji, zvakava chinhu cheiyo ngano dzedunhu iyo inoshandiswa mumhemberero nekurangarira. Asi zvichave zvinonyanya kufadza kuziva kuti yucatecan koshitomu yakaita sei.
Ndeipi yakajairika koshitomu yeYucatan
Kuti titsanangure hunhu hwehembe dzechinyakare dzeYucatan, isu tinofanirwa kusiyanisa pakati pehembe dzevarume nevakadzi. Asi kutanga, isu tinofanirwa kutaura newe nezve hanzu yakakosha mune idzi mbatya dzeYucatecan uye kunyangwe mune dzedzimwe nyika dzeMexico dzakadai Puebla o Querétaro. Isu tinoreva huipil.
Iyo huipil kana hudil
Sezvatakakuudza kare, rudzi urwu rwebhurauzi kana chipfeko chakashongedzwa nemavara akajeka chiratidzo chenhoroondo yenharaunda. Pakusvika kwevaSpanish, vakadzi vechiMayan vaipfeka rakashama torso. Sezvo avo vaifunga kuti zvaipesana netsika, vakatsvaga kuvafukidza nenguvo yainge yatoshandiswa mune mamwe matunhu eMexico uye yaizivikanwa neshoko reNahuatl Huipilli, kubva payakaitika kusvika güipil kana hipil.
Yakanga ichiwana mukurumbira wakawanda pamusoro pemazana emakore kuti, parizvino, chipfeko chaiye cheYucatan chevakadzi chinonzi hipil, kunyange hazvo ichi chisingasanganisiri ichi chete, asiwo zvimwe zvipfeko. Ndokunge, zvinotora iri dhirezi retsika sehwaro uye rinowedzera zvimwe zvidimbu kwariri.
Iyo hipil, saka, iri dhirezi jena ine chiyero chakaenzana pamusoro uye pazasi. Iyo yakasonerwa pamativi uye inosiya kuvhurika kumawoko maviri, nepo iyo yemusoro yakatenderera uye iine miganhu yakatenderedza. Pamucheka muchena, ese ari mutsipa, maoko uye zasi zvine nezvakarukwa yemuvara wakakura. Asi, sezvatakakuudza, zvipfeko zvevakadzi zvemunharaunda ino yeMexico zvinotakura zvimwe zvipfeko.
Yukatán chaiwo chipfeko chevakadzi
Pamusoro pechiuno, mukadzi anopfeka echinyakare Yukatec zvipfeko anogona kupfeka faindi doublelet mativi akaenzana ane maoko anosiya maoko akashama. Izvi zvakare zvakashongedzwa, pamutsipa, nemuganhu wakasarudzika ne nezvakarukwa muchinjiko kusona, silika mune echirungu maitiro uye kunyangwe nemafuta madiki.
Kune rimwe divi, pasi pechiuno, mukadzi wechiYukatecan anopfeka fustan kana petikiki iyo inomira kunze uye yakashongedzwa nemipendero yakafanana neiyo. Kuti ubatsire iyo ensemble, zvishongo zvakasiyana zvinoiswa pane iyi hembe inokodzera kukurukurwa.
Kunyanya, iwo akareba uye akasarudzika rozari iyo inosanganisa goridhe filigree uye coral marozari uye akavezwa neakakosha jewelers eYukatán. Saizvozvowo, zvakabatanidzwa zvakasiyana zvakarembera kwavari. Semuenzaniso, mari yegoridhe inonzi nhovo, kungofanana nechekare vanobva kuSpain. Uye zvakare yakakosha filigree michinjikwa zvakare yakaitwa neYukatecan maartist.
Kana zviri zvebvudzi, zvinonzi t'utch. Inosanganisira kuunganidza vhudzi kumashure muchimiro che sando uye inobatwa neuta reribhoni. Vamwe vakadzi vanowedzera pompadour neakanaka curls. Chekupedzisira, munzeve vanotakura makuru uye marefu micheto yakagadzirwa nendarama yegoridhe nemabwe akavezwa. Kazhinji, ivo vanowirirana nemarozari akakomberedza mitsipa yavo.
Iyo yakajairika Yukatán koshitomu yevarume
Iwo akapfeka zvipfeko zveYukatán zvevarume nevakadzi
Zvipfeko zvechinyakare zvevarume muYukatán zvakapusa. Kuchengetedza musanganiswa nemukadzi, ichenawo, zvese bhurugwa nechikamu chepamusoro. Yekutanga inogadzirwa neye canvas kana denim uye inopera mune yakafara bhero muromo. Zvakare, inotsvairwa nekuayina.
Kune chikamu chayo, iyo shati yakareba uye yakagadzirwa neshinda. Iyo yakaiswawo iron nehanya uye ine mabhatani egoridhe iyo yakaturikwa neketani inovabatana navo mukati mehembe. Zvisinei, mazuva ano, iyi modhi inowanzo shandurwa kuita yechinyakare guayabera yeCuban mavambo.
Kana dziri shangu, ndizvo yeganda espadrilles Iwo akasungirirwa pachidzitiro chine varnished uye yakasungwa tambo uye ane dehwe chete. Pakupedzisira, ivo vanotakurawo Panama uswa ngowani.
Zvisinei, sutu yebasa yakasarudzika yakati siyanei. Inoumbwa netirauzi yakasimba yekanvasi, t-shati yedonje uye yebhuruu kana mitsetse coti apron yakagadzirwa nejira rakakora, rakagadzirwawo nekanivhasi.
Watoona izvo zveyakajairwa Yukatán koshitomu yevakadzi nevakadzi, iwe unozofarirawo kuziva kana ichishandiswa, ndiko kuti, pamazuva api iwe aunogona kuona maYukatecs akaapfeka nekuzvikudza.
Nguo yekuYukatán inoshandiswa riini
Nekuti, sezvazviri zvine musoro uye zvinoitika mumativi ese epasi, zvipfeko zvakajairika zvinongoshandiswa mu zviitiko zvakakura zvevanhu kana mhemberero dzakatarwa. Ndipo panguva iyo vagari venyika pavanotora mukana wekutorera zvavo zvipfeko uye nekuzvipfekedza zvizvarwa nevashanyi. Ndiyo zvakare nguva iyo, vakapfeka nhumbi dzavo dzechinyakare, varume nevakadzi vachitamba iyo jarana, yakajairika kutamba kwehurumende.
Mamwe emapato aya ndea Musande Agnes muDzitas, ivo La Candelaria muValladolid, ivo Saint Anthony wePadua muTinum, of Mutsvene Kristu weBlisters muMerida kana of Mukadzi Wedu weIzamal munzvimbo isingazivikanwe.
Zvakaenzana zvakanyanya kukosha ibasa reyakajairika koshitomu panguva yekupemberera kwe Mhandara yaGuadalupe, uyo, sezvamunoziva, ndiye musande anodzivirira weMexico yose. Mumhemberero idzi dzese, zvipfeko zvechinyakare zveYukatán zvine kukosha kukuru muchiitiko.
Dairy uye jarana
Tiri kutaura nezvevaquería, tsika yechiYukatecan iyo yakadzokera kunguva dzekoloni. Panguva iyoyo, veSpanish vaive nemapurazi emombe vakaunganidza vashandi vavo kuti vaite "Simbi", icho chaisava chimwe chinhu kunze kwekumaka mombe.
Inoperekedza iri basa, matambiro uye zvimwe zviitiko zvekupemberera zvakaitwa. Kune vekupedzisira, vatori vechikamu vakapfeka mbatya dzavo dzakanaka kwazvo. Nhasi, zviitiko izvi zvinodzokororwa sechinhuwo zvacho chekuvaraidza uye zvakajairika zvipfeko zveYukatán zviripo chaizvo, kunyanya mukutamba.
Iyo yekupedzisira, sezvatakataura, zvakare ine protagonist isingarambike: iyo jarana. Ndiwo chaiwo mutambo wedunhu uye unogamuchira iro zita nekuti, parakatanga, zvaimbotaurwa «Iyo jarana yatotanga». Chero zvazvingaitika, iri mune iwo nguva apo echinyakare Yukatec zvipfeko zvinoenderana.
Kupemberera kwepurazi remukaka muAcanceh
Zvinonzi kwakatangira kutamba uku kuri mu Aragonese jota, vane mutinhimira nema modhi ayo achiri kuratidza nanhasi. Asi zvinosanganisirawo mayan zvinhu. Mupfungwa iyi, tinogona kukuudza kuti mutambo wekubatanidza pakati pevanozvarwa pamwe nekoloni.
Kuti umiririre, vatambi, varume nevakadzi vakapfeka zvechinyakare, vanochengeta torso yavo yakatwasuka vachifambisa makumbo avo kune rwiyo rwemimhanzi Iyi chinzvimbo chinokutendera iwe kukudziridza chimwe chezvinhu zvakajairika zvezvinhu zveiyo jarana: tamba uine chinhu mumusoro mako. Muchokwadi, vatambi vane mukurumbira vanozviita nebhodhoro rakazara uye kunyangwe netiyiti yemagirazi vasina kuvasiya.
Kune rimwe divi, vaimbi, avo vanopfekawo zvakajairika jasi reYukatán, vanoshevedzwa ndarira bhandi. Inogadzirwa nemabhosvo maviri, trombone, mbiri mbiri, mabass maviri, saxophone, maviri timpani uye güiro. Iyo yekupedzisira chimbo chekuridza chakagadzirwa neyakaomeswa mhodzi iyo inoshandiswawo mune yechinyakare yeCuba mumhanzi nedzimwe nyika dzeLatin America. Aya mabhandi endarira anoita kunge anofarirwa muMexico se ivo mariachis, mapoka emimhanzi eMexico izvo zvinokodzera kuzivikanwa zvakadzama uye zvatakatotaura pane blog.
Mukupedzisa, takakuratidza iyo Yukatán chaiwo koshitomu uye zvakare inguva ndeyekuti inoshandiswa. Pasina kupokana, ndechimwe chezvinhu zvakakosha zveYukatec ngano uye zvinofadza kuzviona nematoni machena uye matombo endarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Mekisiko » Yukatán chaiwo koshitomu
Tsika gumi dzinoshamisa kwazvo munyika